सिरियाको टिपीएस थपियो, नेपालको के होला ? – Durbin Nepal News
सिरियाको टिपीएस थपियो, नेपालको के होला ?
दूरबिन नेपाल १८ माघ २०७४, बिहीबार १६:५३ | ८९७ पटक पढिएको
वाशिंगटन डीसी, १ फेब्रुअरी / अमेरिकाले सिरियाको टेम्पोरेरी प्रोटेक्टेट स्टाटस(टि.पी.एस) कार्यक्रम अठार महिनाको लागि थप गरेको छ । डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेकुरिटी (डीएचएस) ले एक सूचना प्रकाशित गर्दै सिरियामा जारी सशस्त्र द्वन्द्व र असाधारण परिस्थितिको कारणले गर्दा अठार महिनाको लागि टिपीएस सुविधा थप गरेको जनाएको छ ।
सिरियाको टिपीएस सुविधा सेप्टेम्बर ३०, २०१९ सम्मको लागि थप भएको छ । मार्च २९,२०१२ देखि सिरियालाई यो सुविधा प्रदान गरिएको थियो । सिरियाका करिब ७ हजार व्यक्तिले सो सुविधा लिएका छन् ।
डीएचएस सचिव क्रिस्टजेन नील्सनले हरेक देशको अवस्था विश्लेषण गरेर देश-देशको आधारमा टिपीएस सुविधा निर्धारण गरिने समेत सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाललाई जुन २४, २०१५ देखि प्रदान गरिएको टिपीएस सुविधा जुन २४, २०१८ मा सकिँदै छ । नेपालमा अप्रिल २०१५ मा गएको भूकम्पको पुननिर्माण कार्य अझै नसकिएको हुँदा यो सुविधा थपको लागि नेपालीहरूले आफ्नो स्थानबाट पहल गरिरहेका छन् । नेपाललाइ प्रदान गरिएको यो सुविधा सकिने म्याद बढे सँगै यस सम्बन्धी चासो झनै बढ्दो छ।
अमेरिकाले नेपाल, होन्डुरस, निकारागुवा, सोमालिया, एल साल्भाडोर, हैटी, दक्षिण सुडान, सिरिया र यमनलाइ टिपीएस सुविधा प्रदान गरिरहेको छ ।
१८ माघ २०७४, बिहीबार १६:५३ मा प्रकाशित